मिटरब्याजी उप्रेतीका कारण काठमाडौं छोडेका ठेकेदार जाहेरी लिएर पुगे प्रहरीमा :: Setopati
मिटरब्याजी उप्रेतीका कारण काठमाडौं छोडेका ठेकेदार जाहेरी लिएर पुगे प्रहरीमा भन्छन्- सवा दुई करोडको साँवा-ब्याज १४ करोड पुर्‍याएर मार्छु भन्दै कार्यालयमै तोडफोड गरेपछि काठमाडौं नै छोड्नुपर्‍यो
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, साउन १२
ब्युरोको हिरासतमा रहेका मिटरब्याजी गणेश उप्रेती।
मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीविरूद्ध जबरजस्ती १४ करोड असुली गर्न खोजेको भन्दै अर्का निर्माण व्यवसायीले जाहेरी दिएका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेर डोल्पाका निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र शाहीले मंगलबार जाहेरी दिएका हुन्।
दुई करोड २० लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब रहेकोमा उप्रेतीले १४ करोड हिसाब पुर्‍याएर पीडित बनाएपछि जाहेरी दिन गएको शाहीले बताएका छन्।
उनको बानेश्वरमा सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ। पैसा नबुझाएको भन्दै गत चैत २५ गते उप्रेतीले गुण्डा लगाएर कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि आफू भागेको उनले बताएका छन्।
‘चैतदेखि म तीन महिना आफ्नो साइटमै बसेँ, कार्यालयमा आउने-बस्ने वातावरण भएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘कहिले मार्छु, काट्छु भनेर पनि धम्की दिनुभयो।’
शाहीले चिनजानका आधारमा एक वर्षअघि उप्रेतीसँग दुई करोड ७० लाखमा ल्याण्डक्रुजर प्राडो गाडी किनेका थिए। गाडी ३० हजार किलोमिटर कुदेको सेकेण्डह्याण्ड थियो।
उनले दुई करोड रूपैयाँ तिरे। त्यसपछि उप्रेतीसँग उनले एक करोड ८० लाख रूपैयाँ सापटी लिएका थिए।
उनले जम्मा दुई करोड ३० लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब थियो। त्योमध्ये १० लाख रूपैयाँ तिरे पनि।
‘लकडाउन र कोरोना महामारीका कारण कामहरू रोकिए, पेमेन्ट उठेन, यहीबेला उहाँले मलाई टर्चर दिन थाल्नुभयो,’ शाहीले भने।
मेलुङ गाउँपालिका-१ घर भएका ३३ वर्षीय उप्रेती मित्रपार्कमा गाडीको रिकन्डिसन शोरूम चलाउँथे। उनलाई ब्युरोले साउन १ गते झन्डै २० करोडको चेकसहित पक्राउ गरेको थियो।
शाहीले जाहेरी दिँदा आफ्नो अफिसमा तोडफोड गरेको फोटोहरू पनि उपलब्ध गराएको ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले बताए।
‘हालसम्म दीपेन्द्रसहित तीन जनाले जाहेरी दिनुभएको छ, हामी उप्रेतीको मिटरब्याज कारोबारबारे थप जाहेरीहरू संकलन गर्ने, पीडितको पहिचान गर्ने गरिरहेका छौं,’ सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि दोलखाका प्रकाश कार्की र काठमाडौं कोटेश्वरका हेमराज गुभाजुले जाहेरी दिएका थिए।
मिटरब्याजको पैसामा कार्कीसँग ४ करोड १६ लाख र गुभाजुसँग ४ करोड १४ लाखको चेक लिएर उप्रेतीले सताउँदै आएका थिए।
शाहीका अनुसार उप्रेतीले पटक-पटक चेक लिँदै गए। ‘ब्याकडेटको चेक काट्न लगाएर लैजाने, केही हुँदैन यो फिर्ता भइहाल्छ भन्दै लगेको लगै गर्दा १४ करोड हिसाब पुग्यो,’ उनले भने, ‘त्यति पैसा तिर्नुपर्नै भन्दै कार्यालयमै आएर तोडफोड गर्ने, गुण्डा लगाएर मार्छु भन्न थालेपछि मैले काठमाडौं नै छोड्नुपर्‍यो।’
यो बीचमा आफू कहिले धनगढी, कहिले तेह्रथुम, रसुवा गएर ‘भूमिगत शैली’मा जीवन बिताएको उनले बताए।
प्रहरीले उप्रेतीलाई पक्राउ गरेको थाहा पाएपछि काठमाडौं आएर जाहेरी दिएको शाहीले बताए।
‘हामी सरकारी लिएका हुन्छौं, पेमेन्ट ढिलो भइहाल्छ, तर यहाँ सात गुणा बढी ब्याज असुल्न उप्रेतीजीले टिक्नै दिनुभएन,’ उनले भने।
सुरूमा चिनजान हुँदा उप्रेतीले राम्रो व्यवहार देखाएका थिए। त्यही स्वभाव देखेर आफूले कारोबार गरेको शाही बताउँछन्।
सिन्धुपाल्चोकको मुडेदेखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटर बाटोका ठेकेदार दीपक सापकोटा पनि भूमिगत छन्। उप्रेतीको मिटरब्याज लगानीले टाट पल्टेपछि उनी सडकको कामै छोडेर भूमिगत भएका हुन्। उनी अहिले सम्पर्कमा छैनन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ।
प्रहरीले अहिले उप्रेतीलाई ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनेबारे सरकारी वकिलसँग परामर्श गरिरहेको छ। ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकृत मंगलबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा परामर्शका लागि पुगेका थिए।
‘कसरी मुद्दा स्थापित गराउन सकिन्छ, प्रमाण बलियो राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न सकिन्छ भनी सरकारी वकिलसँग सल्लाह भएको छ,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने।
को हुन् उप्रेती?
दोलखा जिल्ला साबिक पवती गाविस हाल मेलुङ गाउँपालिका-१ घर भएका ३३ वर्षीय उप्रेती ललितपुर भैंसेपाटी बस्दै आएका थिए।
काठमाडौं-७ चाबहिल मित्रपार्कमा उनी द्रिशान्त अटोमोबाइल प्रा.लि. चलाइरहेका थिए।
उप्रेतीलाई प्रहरीले १९ करोड ४३ लाख ६१ हजार ८६० रुपैयाँ बराबरको चेकसहित पक्राउ गरेको थियो।
उप्रेतीले दोलखा मेलुङ गाउँपालिका-७ नै घर भई हाल मध्यपुर ठिमी-२ बस्ने ४० वर्षीय प्रकाश कार्की र रामेछाप गोकुलगंगा गाउँपालिका-१ चुचुरे घर भई काठमाडौं-३२ कोटेश्वर बस्ने ६० वर्षीय हेमरा गुभाजुलाई पीडित बनाएका थिए।
चिन्नेहरूका अनुसार उप्रेती मेलुङ-१ पवतीबाट एसएलसी पास गरेपछि २०६२ सालमा चरिकोट आएका थिए। उनले त्यहाँको भीम उच्च माविबाट प्लस टु पास गरे।
उनी सामान्य परिवारका मानिस थिए। चरिकोटमा डेरा लिएर बस्थे।
प्लस टु पास गरेपछि उनी काठमाडौं हिँडे। ज्ञानेश्वरमा उनले कोठा लिएका थिए।
पुरानो बानेश्वरमा आफन्तमार्फत् लगानी जुटाएर मोटरसाइकलको रिकन्डिसन शोरूम खोलेका थिए।
रिकन्डिसन मोटरसाइकलको कारोबार गर्दै गरेका उनी २०६६ सालतिर एकैपटक गाडीको रिकन्डिसन शो रूम खोल्ने भइसकेका थिए।
जतिबेला उनको, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका विराटनगरका पर्शुराम बस्नेतसँग उठबस चल्न थालिसकेको थियो। र, त्यतिबेला उप्रेतीले पर्शुरामलाई दुई वटा गाडी दिलाएका थिए। उनीहरूको चिनजान भने जिल्लाबासीबाट सुरू भएको हो। राजनीतिक रूपमा पर्शुराम एमालेमा युवा संघमा आवद्ध हुन् भने उप्रेती पनि युवा संघ निकट नै हुन्।
उप्रेतीको मिटरब्याज कारोबारमा जोडिएकाले बस्नेतमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उप्रेतीको शोरूमबाट दोलखाका धेरै व्यापारीले चर्को मिटरब्याजमा गाडी किनेको र मिटरब्याज पैसाको ब्याज थेग्न नसक्ने गरी रहेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्।
उप्रेतीसँग मिटरब्याज कारोबार गरेका चरिकोटकै रिजाल थरका एक सुन व्यापारी अहिले लापत्ता छन्। पैसा तिर्न नसकेपछि उनले उप्रेतीलाई घरै पास गरेर उनले तीन वर्षदेखि चरिकोट छोडेको स्थानीय बताउँछन्।
चार महिनाअगाडि उप्रेतीले चरिकोटको चरिघ्याङमा पाँच करोड रूपैयाँ लगानीमा घर किनेका थिए।
उप्रेतीले ठेकेदारलाई पैसा लगाउने गरेको, गुण्डा लगाएर पेस्तोल तेर्स्याएर चेक काट्न लगाउने गरेको बताउनेहरू पनि छन्। ब्युरोले भने उप्रेतीले रकम नदिएमा डर त्रास देखाउने गरेको, मानिसहरूलाई बाहिर हिँडडुलमा बन्देज लगाउने गरेको, आपराधिक समूह प्रयोग गरी ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको बताएको छ।
मिटरब्याजी उप्रेतीका कारण ‘भूमिगत’ भए मुडे-चरिकोट सडकका ठेकेदार, अर्कैलाई दिइयो ठेक्का
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८, १५:३०:००